thokozani khuphe on News24
ARTICLES RELATING TO THOKOZANI KHUPHE
Zimbabwe's main opposition party has fired its deputy president and two other senior officials on misconduct charges, stoking fears of a split in the party ahead of key elections in July, a month after the death of founding leader Morgan Tsvangirai
The deputy mayor of Zimbabwe's second city Bulawayo was among 12 people who faced disorder charges in court over weekend clashes between rival factions of the country's main opposition party.
Power struggles have remained in Zimbabwe's Movement for Democratic Change, with Nelson Chamisa maintaining that he is the acting leader of the opposition party, as Morgan Tsvangirai continues to receive medical treatment in SA.
Zimbabwe's main opposition is embroiled in a power struggle over who is in charge of the party months before key elections, as leader Morgan Tsvangirai receives cancer treatment in hospital.
Bitter infighting within Zimbabwe’s opposition risks fatally weakening President Robert Mugabe’s political foes just as the sun has begun to set on his 33-year rule.
Defiant MDC Secretary General Tendai Biti has reportedly declared he is the only person now in legal control of the opposition after he staged a daring attempt to oust party leader Morgan Tsvangirai.
Zimbabwe’s main opposition, the Movement for Democratic Change (MDC-T) was reportedly facing a major split after its embattled deputy president Thokozani Khuphe has signalled joining forces with the former deputy president Joice Mujuru led coalition.
Zimbabwe's main opposition party is facing the threat of damaging splits just months before a historic election, as feuding erupts after the death on Wednesday of its leader Morgan Tsvangirai.
Tsvangirai's aide says MDC party to 'deal with with leadership squabbles'
Acting MDC leader, Nelson Chamisa, has called for an an extra ordinary executive and council meeting on Thursday to deal with the power struggles that have hit the party since he was "appointed" interim leader last week.
The rupture inside Zimbabwe’s main opposition party has widened after the family of ailing Morgan Tsvangirai disputed the appointment of deputy president Nelson Chamisa as the MDC's acting leader.
Months before the general election, power struggles are ravaging Zimbabwe's main opposition party as leader Morgan Tsvangirai seeks cancer treatment in South Africa.
Zimbabwe's Movement for Democratic Change party leader Morgan Tsvangirai has reportedly quashed accusations that he wants to cling to power.